Soo-saaraha Sheyga Caddaynta Soo-saaraha Shiinaha iyo Alaab-qeybiye | Anteli
Bulletproof waxay gelisaa PLA logistics muhiimka ah mashruuc cilmi baaris cilmiyeed "Qoryaha Bulletproof dhoobada dhoobada iyo baaritaanka dalabka", ujeedku waa in la horumariyo waxqabadka sare ee silsiladda carbide alwaaxda alaabta rasaasta dhoobada, waxay sare u qaadeysaa heerka qalabka ilaalinta askarteenna shaqsiyeed. Mashruuca waxaa si rasmi ah loo ansixiyay bishii Juun 2006. Bishii Diseembar 2009, dhoobada qoryaha aan rasaastu karin oo ay si wadajir ah u soo saareen Machadka Cilmi-baarista ee Xarunta Dhexe ee Saadka ee Ciidanka Xoreynta Dadweynaha iyo shirkadeennu waxay dhameystireen qiimeyn farsamo. Sannadkii 2012, waxay ku guuleysatay abaalmarinta koowaad ee sayniska militariga iyo horumarka Teknolojiyada.
Tiknoolajiyadda iyo hal-abuurnimada
1. Waxay ikhtiraacday tiknoolajiyad cusub oo lagu diyaarinayo dhoobada carbide-ka ee loo yaqaan 'silicon carbide ceramics' oo ay weheliso alaab alwaax u ah alaabta ceeriin;
2. Horumar ku saabsan tiknoolajiyada diyaarinta saxanka xabbadda aan xabadka karin ee silikoon-xajmiga weyn leh si loo buuxiyo farqiga gudaha;
3. Qoryaha loo yaqaan 'Silicon carbide' dhoobada dhoobada dhoobada dhoobada ah waxay awood u leedahay inay iska caabbiso weerarada badan;
4. Kordhi qaabeynta qaabdhismeedka tuugada rasaasta celisa si loo yareeyo miisaanka loona hagaajiyo waxqabadka rasaasta.
Waxyaabaha aan xabaddu karin ee Silicon carbide waxay leeyihiin faa'iidooyinka miisaanka fudud, adkaanta sare iyo waxqabadka wanaagsan ee ballistic, iwm. Waa shey ku habboon samaynta jaakadda xabbadda celisa, baabuurka, markabka, helikobtarrada iyo gaashaanka kale ee difaaca.
La aasaasay 2011, shirkadeena waxay leedahay khibrad hodan ah oo xirfad leh oo ku saabsan wax soo saarka badeecada silikoonka. Waxaan haynaa dhowr xariiq oo wax soo saar ah oo ah silikoon carbide ah oo sanadkii soo saarta 70,000 tan. Alaabtayada carbide siliconku waxay la kulmaan heerarka shahaadada caalamiga ah waxayna ku guuleysteen amaan loo dhan yahay suuqa caalamiga ah.
Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyay daraasiin dal oo adduunka oo dhan ah, waxaanan ku hawlan nahay iskaashi muddo-dheer ah oo loogu talagalay shirkadaha caaryada adduunka caan ku ah iyo isticmaalayaasha carbide silicon.
Waxaan haynaa koox xirfadlayaal r & D ah, koox iibin firfircoon si loo daboolo baahida macaamiisha, waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno.
Hore: silsiladda carbide tubbada dhalaalaysa iyo kuleylka kuleylka
Xiga: Biiyaha gubi
Xaashida Dareenka Dheeraadka ah ee Sheyga Rasaasta Le'eg
Hardness Silicon Carbide Sheet Bulletproof Sheera